Famonoana an-kitsirano :: Migadra eny Tsiafahy ilay polisy nitifitra jiolahy efa lavo • AoRaha
Famonoana an-kitsirano Migadra eny Tsiafahy ilay polisy nitifitra jiolahy efa lavo
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy, omaly, ilay pôlisy nitifitra nahafaty jiolahy efa lavo tamin’ny tany, teny Ampefiloha, tamin’ny zoma 23 aogositra lasa teo. Maneho ny fialan-tsininy sy miara-ory amin’ny fianakavian’ny maty ny avy amin’ny Pôlisim-pirenena, araka ny fanambaràna nataon’ny contrôleur général Rafanomezantsoa Roger, minisitry ny Filaminam-bahoaka, omaly hariva, tetsy amin’ny birao fiasany eny Anosy.
Ankoatra ny fampidirana am-ponja ilay pôlisy Inspektora dia misy koa ny fanasaziana azy, izay mety hiafara amin’ny fandroahana tsy ho pôlisy intsony, hataon’ny minisitera. Voampanga ho namono olona an-kitsirano io mpitandro filaminana io.
Nosamborina ilay pôlisy taorian’ny tranga teny Ampefiloha, tamin’iny zoma iny. Natao famotorana tao amin’ny sampana misahana ny heloka bevava avy hatrany izy. Natolotra ny Fitsarana. Naterina eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy izy, omaly ihany.
“Tsy miray tsikombakomba amin’ny jiolahy ny ato amin’ny Pôlisim-pirenena. Tsy maintsy hatolotra ny Fitsarana izay pôlisy mandika lalàna. Tamin’ny faran’ny herinandro ihany dia natsahatra tamin’ny asany iny pôlisy nahafaty olona teny Ampefiloha iny”, hoy ny contrôleur général Rafanomezantsoa Roger manamafy.
Nisy mpandraharaha iray saika notafihin’ny jiolahy nirongo basy, teny Antsahamanitra, tamin’io zoma 23 aogositra io. Nifanehitra tamin’ny pôlisy ireo jiolahy. Nisy ny fifampitifirana. Namoy ny ainy ny iray tamin’ireo jiolahy taorian’izay. Pôlisy roa naratra. Divi-janahary no tsy nahavoan’ny bala ny pôlisy iray teo amin’ny lohany, araka ny fitantaran’ireo pôlisy namany.
Tsy vita teo fa nitohy hatreny Ampefiloha ny fanenjehan’ny pôlisy an’ireo jiolahy sasany mbola afaka nitsoaka. Tra-tehaka teo ny iray rehefa nianjera tamin’ny tany. Vory maro ny olona nijery ilay lehilahy nianjera sady efa voahodidina pôlisy misaron-tava. Tsy fantatra izay antony fa mbola notifirin’ny iray tamin’ireo pôlisy nisaron-tava teo amin’ny lohany io jiolahy lavo tamin’ny tany io, teo imason’ireo olona marobe. Nitsamboatra indray mandeha izy dia tapitra tanteraka ny ainy, taorian’izay.
Nisy nahazo horonantsary ny zava-nisy. Vetivety foana dia niely tamin’ny pejy tambajotran-tserasera “facebook” ny rakitsary nahitana ny fomba namonoana an-kitsirano an’ilay lehilahy voalaza fa isan’ireo “jiolahy”. Tezitra mafy ireo tompon’andraiki-panjakana ambony maro nahita ny zava-niseho, araka ny loharanom-baovao. Nilatsaka ny baiko, tsy maintsy hatao famotorana sy hatolotra ny Fitsarana io pôlisy nitifitra nahafaty olona io.
Herisetra sy fandrobana :: Voafira famaky ilay vehivavy nanavotra an-janany